पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा २ सय बेड क्षमताको छुट्टै प्रसुतिगृह बन्दै – Peacepokhara.com
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा २ सय बेड क्षमताको छुट्टै प्रसुतिगृह बन्दै
धन बस्नेत , पोखरा १ साउन । तीन वर्षभित्रमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल परिसरमा प्रसुति तथा बच्चा वार्डको छुट्टै भवन निर्माण हुने छ । भवनमा दुई सय बेड राखिने छ ।
अस्पतालको भवन निर्माण गर्न अस्पताल प्रशासनले बी कोई मुन्ना एण्ड आचार्य प्रतिष्ठा(जे.भी)सँग सम्झौता गर्दै जिम्मेवारी दिईसकेको छ । कम्पनीले साउनदेखि काम थाल्ने छ । ‘यो वर्षको बजेट झण्डै फ्रिज भएन् । असार मसान्त नसकिदैं सम्झौता ग¥यौं । बजेट फ्रिज हुनबाट जोगियो । आर्थिक वर्षदेखि काम शुरु हुन्छ ।’ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।
भवन बनाउने रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको छ । पहिलो किस्ता स्वरुप दुई करोड उपलब्ध गराएको छ । कामसँगै रकम आउने छ । तीन वर्षमा भवन निर्माण पुरा गरिने छ । त्यतिबेलासम्म ४० करोड हुने खर्च हुने अनुमान छ । तीन वर्षभित्रमा भवन निर्माण कार्यलाई टुग्याई सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाई थियो ।
प्रसुति र बच्चा वार्डको लागि दुईसय वेड क्षमताको भवन निर्माण गरिने डा. श्रेष्ठको भनाई थियो । ‘प्रसुति र बच्च वार्डमा दुई बेड राखिने छ । अर्को तलामा ओटी(अपरेशन थिएटर) राख्ने योजना छ’ उनले भने—‘छिटो काम थाल्न जरुरी छ ।’ क्षेत्रीय अस्पताल परिसरमा प्रसुति र बच्चावार्डको छुट्टै ब्लक बनाउने योजना केही वर्षअघिदेखि नै रहेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन् ।
भईरहेको प्रसुति तथा बच्चा वार्डसँगै अपरेशन थिएटर कोठामा जीर्ण बनेका छन् । गत बैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पले असर पु¥याएको भन्दै मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. श्रेष्ठले नयाँ भवन निर्माणपछि पुरानो भवनलाई ‘डिस्पोज’ गर्नुपर्ने बताए । क्षेत्रीय अस्पतालको सबैभन्दा पुरानो भवन नै प्रसुति र बच्चावार्डको ब्लक रहेको उनको भनाई थियो । उनका अनुसार ४० वर्षअघि उक्त भवन बनाईएको हो ।
स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको रुपमा अगाडि बढेको अस्पतालमा दुईसय बेड क्षमताको प्रसुति भवन बनेपछि दक्षजनशक्ति पनि उत्तिकै खाँचो छ । अहिले चारजना विशेषज्ञ छन् । १६ जना मेडिकल अफिसर र १५ जना नर्स कार्यरत छन् । ‘भवन पछि सेवा शुरु गर्न यसको दोब्बर जनशक्तिको खाँचो छ ।’ उनले भने । अस्पताल प्रशासनलाई आर्थिक भार थपिने छ ।
भवनसँगै आवश्यक उपकरण राख्न पनि करोडौं खर्च लाग्छ । बेड मात्रै राख्न ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । प्रति बेड अनुमानित १५ हजार रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ । अस्पतालमा अहिले ५० वेडमा प्रसुति सेवा दिइएको छ ।
सोल्जर्स बोर्ड अस्पतालको रुपमा १५ बेडबाट २०१३ सालमा स्थापित अस्पताल कास्की जिल्ला, अञ्चल हुदैं क्षेत्रीय अस्पतालको रुपमा परिणत हुदैं गएको हो । अस्पतालमा पछिल्लो समय मुटु रोग सम्बन्धी उपचार सेवा प्रदान ब्लक गरिएको छ । लायन्स इन्टरनेशनलले आवश्यक उपकरण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
क्षेत्रीय अस्पतालमा सिजनल विरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । सिजनल विरामी मध्ये धेरैजसो शिशुदेखि बालबालिका रहेका छन् । दैनिक एकहजारको हाराहारीमा विरामीहरु उपचारको लागि आउने क्षेत्रीय अस्पतालको तथ्यांकले देखाएको छ । नयाँ भवन निर्माणपछि अस्पतालको प्रसुति सेवा अझ प्रभावकारी हुने विश्वास अस्पताल प्रशासनले गरेको छ ।
पोखरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा अधिकारीले कार्यभार सम्हाले
बिन्ध्यावासिनीको प्रतिमा जोगाउन प्रदक्षिणापथ बन्दै, बाहिरैबाट दर्शन गरेर फर्किने नयाँ ब्यबस्था छिट्टै लागू हुने